Chọpụta ihe niile gbasara San Miguel Market na Madrid | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Gastronomy, Madrid
Chọpụta nke nnukwu ahịa gastronomic nke dị n’obi Madrid. Ọ bụrụ n’ịgaje n’isi obodo ahụ, ọmarịcha ahịa a bụ otu n’ime ebe dị mkpa ị ga-akwụsị, ebe ị nwekwara ike ịnwale ụdị nri na tapas. Ndị hụrụ Gastronomy ga-ekweta na ọ bụ echiche ahịa ọhụụ na-agbasakwa n'obodo ndị ọzọ.
El Mercado de San Miguel na-enye ihe karịrị ụlọ iri atọ ebe ị nwere ike ịnwale ụdị nri na ụtọ niile. Na mgbakwunye, ọ dị na ụlọ mara mma ma ọ ga-adị nso na ebe dịka Onye isi obodo Plaza. Ọ bụ oge nkwụsị dị mkpa iji nwetaghachi ike mgbe ị gara Madrid.
1 Akụkọ banyere ahịa
2 Buildinglọ ahịa
3 Ihe Mercado de San Miguel na-enye anyị
4 Otu esi eleta ya
Akụkọ banyere ahịa
Nke a abụrụlarị mpaghara ahịa n'oge ochie, mana ọ bụ ụdị ahịa na-emepe emepe ebe ndị guild na-ere ngwaahịa ọrụ aka ha na ụlọ ahịa dị iche iche. Na narị afọ nke iri na itoolu ọ bụ ahịa ghere oghe maka ire azụ. Mmalite nke ahịa mechiri emepe amaliteghị ruo mmalite narị afọ nke XNUMX site n'aka onye na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ bụ Alfonso Dubé y Díez. Ọ bụ ahịa ndị ọzọ dị na Europe sitere n'ike mmụọ nsọ dị ka ígwè, n'ụdị nke Halles de Paris. E guzobere ya na Mee 13, 1916.
Dị ka ọrụ dị ka ahịa na-agbada n'ihi mbata nke ụlọ ahịa na ebe ịzụ ahịa, e kpebiri ịgbanwe ọrụ ahụ. Nke a bụ otú o si bụrụ ohere nke gastronomic nke malitere ịdọta ọtụtụ narị ndị njem kwa afọ na-achọ ahụmịhe ọhụụ maka okpo ọnụ ha.
Emegharịrị ụlọ a na 2009 iji nye echiche ọhụrụ a, nke sitere n'ike mmụọ nsọ ahịa ndị dị ka La Boquería na Barcelona. N'ime ọ ga-ekwe omume ịhụ ụdị ígwè mbụ ahụ yana oriọna Fernandino na taịl Arab. Mpaghara ahụ na-enwu gbaa iji kpuchie ime ahụ, ha nwekwara sistemụ ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ maka oge oyi na vaporization mmiri maka oge ọkọchị, ihe na-eme ka ahụmịhe nke ndị gara ahịa a n'oge ọ bụla ka mma.
Ihe Mercado de San Miguel na-enye anyị
Ihe omuma ohuru wee site na imeghari onodu ndi di n'ime ahia iji nye ihe di iche. A choro ya ọnọdụ ọ bụla na-enye nanị otu ọpụrụiche naanị otu a na - enweghị ike ịmegharị na ahịa, nke mere na onye ọ bụla dị iche na nke gara aga. Naanị otu n'ime ọnọdụ ndị dịbu gara aga bụ otu, ahịhịa ndụ.
Ọ bụrụ na anyị agaa n’ahịa a, anyị nwere ike ịhụ ụlọ ebe a na-a drinksụ ihe ọ drinksụ drinksụ, ihe oriri, ụgbọala, ebe a na-apụ apụ na ebe swiiti. Nke a bụ otú m si mara kewaa iche iche ọpụrụiche nke ahụ dị n'ahịa.
N'ime na-a stụ ụlọ Anyị na-achọta ntụaka dịka 'La Hora del Vermut', ebe ha na-enye anyị vermouths sitere n'akụkụ dị iche iche. Na 'Pinkleton & Wine' ị nwere ike ịnụ ụtọ mmanya dị iche iche. 'Black kọfị' bụ ụlọ ahịa kọfị nwere kọfị mara mma.
na ụgbọ ibu bụ obere ụlọ ebe ha n’enye anyi nkpuru eji esi nri na nri ndi anyi ga ewepu. 'El Señor Martín' nwere ezigbo ndị na-agba ọsọ Andalusia. 'Tonda' na-eje ozi ezigbo ọrụ pizzas Italian. 'Mozzarella Bar' raara onwe ya nye cheese nke ndị omenkà Italian na 'Arzábal croquetería' na-eje ozi ọgaranya croquettes.
na O doro anya na ụlọ ahịa na-aba ụba, na nnukwu ihe. 'Mozheart' na-emepụta tapas nwere ọgaranya Italian mozzarella. 'Daniel Sorlut' bụ ụlọ ahịa oporo, 'Amaiketako' na-enye ngwaahịa nka na tapas nke sitere na Basque. 'Felixia' nwere nkpuru osisi na akwukwo nri juputara na nke juputara na nkpuru osisi nke okpomoku na ihe ndi ozo. Na 'La Casa del Bacalao' ị nwere ike detụ nri mkpọ dị elu, dị ka anchovies bara ụba si Santoña.
Ọ dịghị akatabi okop zuru ezu na-enweghị desserts na ato uto. Na 'Horno de San Onofre' ọ bụ ntụnye aka na Madrid ma na-eje ozi na-atọ ụtọ ọrụ aka ma ọ bụ desserts ọgbara ọhụrụ. 'Rocambolesc' bụ ọrụ aka ice cream ụlọ ahịa ebe enwere chọkọletị, chọkọletị ma ọ bụ achịcha dị iche iche. Na 'La Yogurtería' ị nwere ike ịnwale ice cream na mmiri ara ehi ọhụrụ.
Otu esi eleta ya
Ahịa San Miguel ọ dị na agbata obi La Latina, na ntụziaka Plaza de San Miguel s / n, na nso Plaza Mayor. Oge o nwere bụ Mọnde, Tuesday, Wenezdee na Sọnde site na elekere 10:00 ruo 24:00. Tọzdee, Fraịde na Satọdee site na 10: 00 ruo 02: 00 n'ụtụtụ. N’ezie, a na-atụ aro ka ị nọrọ n’agụụ n’oge anyị chọrọ iri ụdị nri dị iche iche, desserts na ọ drinksụ drinksụ ha nwere. Ọtụtụ ndị isi na-atụ aro ka ha gaa maka vermouth, n'ụtụtụ ma ọ bụ n'abalị maka nri abalị, ebe ikuku nwere ike ịdị iche.
Okwesiri ighota na iji meziwanye onyinye ahia ha tinyere ọtụtụ ndị siri nri na Michelin Stars. Aha ndị dị ka Jordi Roca, Rodrigo de la Calle, Ricardo Sanz ma ọ bụ Roberto Ruíz na-enye nri ha bara ụba ka ndị njem nleta nwee ike detụ naanị ihe kachasị mma na ahịa Madrid a ma ama.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Madrid » Ahịa San Miguel na Madrid
Booụbiga mmanya ókè